FAQs - Beihai edityanisiweyo Materials Co., Ltd.
Q: Yintoni i-AFP (iPhaneli yeGlasi yeAluminiyam)?
I-Aluminium foam yinto entsha yentsimbi eyenziwe ngumoya wesiponji emva kokunyibilika kwe-aluminium ingot enezinto ezahlukeneyo zemichiza kwaye inezinto ezininzi zeseli zangaphakathi zesakhiwo.Isakhiwo seselfowuni esine-aluminium eqinileyo equlathe iqhezu elikhulu legesi pores. Iipore zinokukalwa (zivaliwe iiseli amagwebu), okanye zinokwenza inethiwekhi edityanisiweyo (evulekileyo amagwebu eseli).
Q: Yintoni evula iselfowuni yealuminium foam?
Inika into yokuba iseli nganye yepore idityanisiwe ngaphakathi kwaye ikwanomoya wokungenisa umoya ngelixa ibamba isandi. Ineentlobo ngeentlobo zezicelo kubandakanya ukutshintshiselana ngobushushu (ukupholisa izinto zombane, iitanki zekryogen, kunye nezitshisi zePCM zokufudumeza ubushushu), ukufunxwa kwamandla, ukusasazeka kokuhamba kunye nokukhanya kobunzima bokukhanya.
Q: Zeziphi ezinye izicelo eziqhelekileyo ze-AFP (pen-cell) yethu?
I-foam evulekileyo evulekileyo yeselfowuni iluncedo ikakhulu kubushushu obutshintshisanayo / isinki, izihluzo ezikumgangatho ophezulu, ii-electrode ezingena ngaphakathi, ulwakhiwo oluxakekileyo, iziqinisi zokuhamba kolwelo kunye ne-cores yezixhobo ezidityanisiweyo.
Q: Yintoni evaliweyo yeselfowuni yealuminium foam?
Ama-pores ngaphakathi atywinwe kwaye avalwe ukusuka komnye komnye. Ibonisa ukuqina okuphezulu. ubunzima obuphantsi (bunokudada emanzini), kunye nokufakwa kwamandla okuphezulu. Ngaphandle koko, nathi sinako ukubetha imingxunya kwisisele esivaliweyo se-AFP.
Q: Zithini izicelo ze-AFP (isisele esivaliweyo)?
Ezi zinto sele zikhankanyiwe apha ngasentla ziyi-AFP ye-cnable (close-ell) ukuze ikwazi ukufikelela kwiimfuno ezithile zezithuthi, ezokuhamba ngenqwelomoya, ezololiwe kunye necandelo lokwakha iinjineli. Kuyafaneleka nakwezinye izicelo ezinokubakho kwinqanaba lokuyilwa kunye noyilo apho ukukhuselwa kombane, ukuthomalalisa ulwakhiwo, ukumelana nelangatye, kunye nolwakhiwo lomgangatho wokuhombisa luyafuneka.
Q: Kutheni ukhetha iChina Beihai Aluminium Foam Panel?
Iphaneli yethu yeglasi yeAluminiyam isetyenziselwa ukufakwa kwesandi, ubungqina besandi, ukungabi namlilo kunye nokungangeni manzi. Ngaphandle koko, inamandla amakhulu, ukukhanya okukhulu, i-100% eco-friendly kwaye inokusetyenziswa kwakhona eyenza ukuba i-AFP yethu ibe ngaphezulu kwezinye iimveliso ezifanayo, ezinjenge-honey-comb, njl njl. Umgaqo kaloliwe, kunye necandelo lokwakha iinjini okanye olunye uyilo kunye noyilo lwangaphandle okanye ngaphakathi.Iipaneli zethu zinokulungiswa ngokulula njengokhuni, kusetyenziswa iindlela eziqhelekileyo ezinje ngokusaha, ukubhola, njl.njl. isilingi, udonga kunye nomgangatho.
Q: Sisebenzisa ntoni ukudibanisa?
Isamente okanye ezinye izinto eziqhelekileyo zokwakha, njengeglu.
Q: Yintoni i-M0Q (ubuncinci be-odolo yobungakanani)?
Ubuncinci be-odolo yi-500m '.
Q: Ndingathanda iisampulu, ndingazifumana njani?
Iisampulu zeemveliso zethu zihlala zifumaneka. Bhala nje i-imeyile kuthi, abasebenzi bethu bokuthengisa baya kubuyela kuwe kwaye bakulungiselele i-ASAP.
Q: Ngaba iisampulu zisimahla?
Ngokubanzi, iisampulu ezincinci zisimahla kwaye siya kuhlawula iifizi zokuhamba ngexesha lokuqala. Nangona kunjalo, ukuba ufuna iisampulu ezinkulu, zonke iifizi ziya kuthwalwa kuwe, kubandakanya nemirhumo yesampulu, iifizi zothutho, njl.
Q: Ngaba l ndwendwela umzi-mveliso wakho?
Hayi, asivumelekanga ukuba abathengi bethu batyelele umzi-mveliso wethu njengoko iimveliso zethu ziimveliso ezintsha zamalungelo awodwa omenzi wechiza. Kodwa, siza kukuvumela ukuba ubone igumbi lethu lokubonisa e-Jiujiang.
Q: Uthini umahluko we-AFP yethu kunye nobusi?
Ikama yobusi yahluke mpela kwi-AFP yethu kwaye inokusetyenziselwa ukumelana nobushushu kuphela. Kodwa i-AFP yethu ayinakusetyenziselwa kuphela ukumelana nobushushu, kodwa kunye nokugquma kwesandi, ukungabi nasandi, ukucima umlilo kunye nokufakwa kwamandla. Amacala omgangatho wealuminium kodwa hayi ibhodi yesandwich yebhodi yesanti ekhanyayo. Iziphumo zeendleko zomgangatho wobusi wealuminium ephezulu kakhulu. Ngapha koko, ibhodi yesandwich yokukhanya ene-aluminium ene-porous ine-performance ephezulu kakhulu kumandla oomatshini, ukuvavanywa kwesandi, ukufunxa ukothuka, ukufudumeza ubushushu kune-honeycomb aluminium.
Q: Uthini umahluko womgangatho wethu weAluminiyam wenziwe ngomthi?
Umgangatho we-aluminium okhanyayo we-ultra-light porous ubalasele ekusebenzeni kwaye ungabizi kakhulu kwindawo yeyunithi minyaka le, yiyo loo nto utyalo-mali luphezulu kancinci.
Q: Sele zikhona izixhobo ezisetyenziswa ngokubanzi ze-acoustic, ezinje ngoboya beglasi, i-asbesto, njl.
Xa kuthelekiswa nezinto ezisetyenziswa ngokubanzi ukufunxa izandi ezinje ngoboya beglasi, iasbestos, into entsha-- igwebu lealuminium luphawulwa ngamandla okugoba, ukuzixhasa, ukumelana nobushushu obuphezulu, ubumsulwa, ukufakwa kokufuma okuphantsi. Ezi zibonelelo zilapha ngasentla zenza indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni isandi ngophuhliso lwendawo.
Ukukhanya kwesinyithi kwimpahla yentsimbi yinto efanelekileyo yokufumana ingxolo kuloliwe ongaphantsi komhlaba wedolophu, kaloliwe okhanyayo kunye nezithuthi zikawonke-wonke kunye nokuphucula isandi kumagumbi e-acoustic, iiholo ezinemisebenzi emininzi. Okuncanyathiselwe kwikhonkrithi okanye kwizakhiwo zentsimbi kwaye zakhiwe kwi-viaduct nangaphezulu kumacala omabini, inokusebenza njengodonga olukhulu lokuthintela isandi, ukunciphisa ingxolo yezithuthi esixekweni; ikwanokusetyenziswa koomasifundisane, izixhobo zoomatshini, iingcango zangaphandle zokwakha indawo ukufunxa ingxolo.